घर फुटबल EXTRAS फुटबल प्रबन्धकहरू नुनो एस्पेरिरिटो सेन्टो बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
LB एक फुटबल प्रबन्धक को पूरा कहानी प्रस्तुत गर्दछ जो उपनाम द्वारा सबै भन्दा राम्रो चिनिन्छO Substituto“। हाम्रो Nuno Espírito सैंटो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्या्क तपाईको लागी उनको बचपनको समय देखि आज सम्म उल्लेखनीय घटनाहरु को एक पूरा खाता ल्याउँछ। विश्लेषणमा उसको पारिवारिक पृष्ठभूमि, प्रख्यात हुनु अघिको जीवन कथा, प्रख्यात कथा, सम्बन्ध र व्यक्तिगत जीवन शामिल छ। थप रूपमा, अन्य अफ-पिच तथ्यहरू उहाँ बारे थोरै ज्ञात छ।
हो, सबैलाई Wolverhampton Wanderers को साथ उनको प्रबन्धकीय प्रदर्शनको बारे मा थाहा छ। यद्यपि केवल थोरैले नुनो एस्प्रिटो सान्तोको जीवनीलाई ध्यान दिन्छन् जुन एकदम चाखलाग्दो छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
न्युयो एस्पेरिरिटो सेन्टो बचपन स्टोरी प्लस अनल्टल्ड जीवनी तथ्य-बाल्यकाल
सुरूवात गरेर, उसको पूरा नाम नुनो हर्लान्डर सिमोज एस्पेरिटो सान्तो हो। नुनोको जन्म जनवरी १ th .25 को जनवरी २ 1974 मा भएको थियो। साओ टोमे र प्रिन्सेप, अफ्रिकी टापु, मध्य अफ्रिकाको गिनीको खाडीमा रहेको भूमध्यरेखामा अवस्थित।
नुन आफ्नो आमाबाबुलाई शर्मीला र शान्त शिशुको रूपमा जन्मिएको थियो जसका नामहरू अपेक्षाकृत अज्ञात छन्। तथापि, बढ्दै गयो, तिनले आफ्नो साँचो क्षमता पत्ता लगाउँदा तिनले स्थानीय साओ टोम फुटबल टूर्नामेन्टमा भाग लिइन्। नुन को एक सनकी र ऊर्जावान व्यक्ति को रूप मा देखा पर्यो जो दूसरों लाई र एक युवा केटा को रूप मा पनि प्यार गर्न को लागी प्यार गर्दछ, उनले बिना पूर्वाग्रह को चीज देख सके।
आफ्नो जीवनको शुरुमा जब नुनो लगभग १० वर्षको थियो, उनको आमा र बुबाले साओ टोम प्रस्थान गर्ने निर्णय गरे। नुनो एस्पिरिटो सान्तोको परिवारले अझ राम्रो आर्थिक अवस्था प्राप्त गर्न पोर्चुगलमा बसाई सरेको थियो। त्यहाँ पुगेपछि तिनीहरू पोर्चुगलको ब्यारेरो नगरपालिकाको सिभिल एन्टोनियो दा चर्नेकामा बसोबास गरे। यो त्यहि हो जहाँ उसको क्यारियर यात्रा वास्तवमै सुरु भयो।
न्युयो एस्पेरिरिटो सेन्टो बचपन स्टोरी प्लस अनल्टल्ड जीवनी तथ्य- युवा क्यारियर
सन् १ 1985 11 In मा जब उनी ११ वर्षका थिए, नुनोले आफ्नो फुटबल फुटबलको खेल सन्तोआन्टोनिसेन्स नामको स्थानीय फुटबल क्लबमा शुरू गरे। समय बित्दै जाँदा, नुनो अन्य क्लबहरूमा प्रगति गरियो। ऊ साथीहरूबाट एक खुशी साथीको रूपमा देखीन्थ्यो जसले सधैं आफ्नो फुटबल खेल्छ कुनै पनि वातावरणमा अनुकूलन गर्न सक्दछ।
नुनोको युवा क्यारियर १ 1985 1992 देखि १ XNUMX XNUMX २ बीच चार विभिन्न पोर्तुगाली युवा क्लबहरू सहित फैलिएको थियो। एक जवान केटा को रूप मा, त्यो एक संग उनको पेशेवर गोलकीपर बन्ने सपनाहरू सच्याउने तयारीमा छन्। त्यो दिन खेल्ने क्रममा यो स्पष्ट थियो सान्तोआन्टोनिसेन्स, क्विमिगल, क्याडोरस टोरिनेसेस र भिटेरिया गुमेराइज जहाँ उनले आफ्नो युवा जीवनलाई समाप्त गरे।
न्युयो एस्पेरिरिटो सेन्टो बचपन स्टोरी प्लस अनल्टल्ड जीवनी तथ्य- बैठक Jorgie Mendes
लेखेको समयमा जस्तै, फुटबल फ्यानहरू जसले खेललाई साँच्चिकै पछ्याउँदछन् उनीहरूलाई नुनो र होर्जे मेन्डेस बीचको सम्बन्ध थाहा हुन्छ। यो सत्य हो किनकी दुबै PAL अतुलनीय छन्। अब हामी तिमीलाई उनीहरूलाई कसरी भेट्ने भनौं।
नुनोको गोलकीपिंग र पछि व्यवस्थापकीय क्यारियरको लागि महत्वपूर्ण मोड १ 1996 22 in मा एक लोकप्रिय पोर्तुगाली नाइटक्लबमा शुरू भयो। धन्यको रात, नुनोको जर्ज मेन्डिससँग भेट भयो जो केवल पार्ट-टाइम डीजे र भिडियो स्टोर प्रबन्धक थिए। त्यसो भए, ऊ फुटबल एजेन्ट व्यवसायमा जानको लागी सोचेको थिएन। यो त्यस्तो समय थियो जब २२-वर्षीय गोलकीपर नुनो खेलमा ठूलो बनाउनको लागि कडा खोजी गरिरहेका थिए। त्यो रात, जोर्गे र नुनोको बीचमा एक अविस्मरणीय कुराकानी शुरू भयो जसले भर्खर क्लबमा एक अर्कालाई भेटे।
न्युयो एस्पेरिरिटो सेन्टो बचपन स्टोरी प्लस अनल्टल्ड जीवनी तथ्य- जर्जी मिन्डेस बनाउने
तपाईंलाई थाँहा थियो?… त्यही रात, पर्याप्त अवसरहरूको बारेमा कुरा गरिरहँदा जर्ज मिन्डिजले आफ्नो कल्याण पत्ता लगाए, फुटबल एजेन्ट व्यवसायमा एक अवसर। पहिलो, उनले नुनलाई उनको पहिलो क्लाइन्टको रूपमा भाडामा लिएका थिए जसले उनले सहमति गरे। नाइट क्लब छोड्न अघि उनीहरूले आफ्ना कार्य वस्तुहरू सेट गर्न थाल्नुभयो।
भोलिपल्ट, होर्गेले नुनोलाई अडीच घण्टा स्पेनको डेपोर्टिभो ला कोरुना तर्फ लगे र फुटबल क्लबका अध्यक्षलाई भेटे। नजिकै आइपुगे पछि, होर्जले क्लबका अध्यक्षलाई नुनोको सम्भाव्यतामा विश्वास गरे कि उनलाई स्पानिश क्लबले किन किन्नुपर्दछ। एक सफल कुराकानी पछि, Deportivo ला Coruna उनको सम्झौता स्वीकार। यो त्यस्तो समय थियो जोर्गेस मेन्डिज आफ्नो फुटबल एजेन्ट कम्पनी खोल्नको लागि बढि प्रेरित भएको थियो जुन अहिले चिनिन्छ GestiFute। GestiFute फुटबलर्सहरूको लागि सबैभन्दा उत्कृष्ट एजेन्टर सेवाहरूमध्ये अब सम्म एक छ। तब देखि, दुबै साथीहरू भन्दा राम्रो साथीहरू छन्।
लेख्ने समयमा जस्तै दुबै नुनो र मेन्डेज भेलामा भेला भई नयाँ साहसको आनन्द लिन्छन्। आज, जर्ज मेन्डिसले प्राय: नूनोका खेलाडीहरू विशेष गरी पोर्तुगाली फुटबलरहरूको आपूर्ति गरेका छन्। आज, उनी तर्कसंगत विश्व फुटबलको ग्राहकहरु संग सब भन्दा शक्तिशाली एजेन्ट हो Jose Mourinho, Rui Patricio, हेडर कोस्टा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जेम्स Rodrguez, जोआओ माउन्टिनो आदि
न्युयो एस्पेरिरिटो सेन्टो बचपन स्टोरी प्लस अनल्टल्ड जीवनी तथ्य- A Mourinho Desciple
स्पेनी क्लबहरूसँग5वर्ष बिताए पछि, नुन्को एफसी पोर्टोमा सामेल हुन पोर्चुगल फर्कियो। त्यहाँ उहाँ बन्नुभयो Jose Mourinho साँचो चेला, कसैले खुसीसाथ जोसको लागि ब्यान्ट गर्थे र उत्कृष्ट रूपमा प्रदर्शन गर्नुहुँदा।
नुन पोर्टो टोलीको सम्मानित सदस्य थिए, कसैले Mourinho विश्वासिलो पोर्तुगालमा नुनोलाई डब्ब गरिएको थियो सुब्स्टिटुटो जसको अर्थ हो “उपन्यास“। बेंचलाई न्यानो पार्ने भए पनि, उनका केहि मिनेटहरू खेलका लागि महत्वपूर्ण थिए जोस मोरहोइनको एक्सएनएक्सएक्स / एक्सएनएनएक्स सीजनको समयमा यूरोप पोर्टो विजयी।
नुनोले अवलोकन गरे अनुसार २०० Jose मा जोस मोरिन्होको नेतृत्वमा च्याम्पियन्स लिग पोर्टोको आरक्षित गोलकीपरको रूपमा जित्यो।
उनको बजाउने क्यारियर माथि उठाउँदै न्युगो आफ्नो गोल्फेपिङ क्यारियरको दौडान एक क्लबमा स्थायी बन्नु भन्दा बढी वर्षमा ऋण खर्च गर्न स्वीकृत भयो। तीन अलग-अलग देशहरुमा आफ्नो 18 वर्ष कैरियर को पाठ्यक्रम मा, साओ टोम को जन्म भयो गोलकीपर र वर्तमान प्रबंधक ले सिर्फ 199 म्याच खेलाए र यिनीहरु को 102 स्पेनी दोस्रो श्रेणी मा ऋण मा थिए। एक गोल्फरको रूपमा उनको उत्कृष्ट मेमोरीले सँधै 2004 मा च्याम्पियन लीग विजयी बनेको छ।
न्युयो एस्पेरिरिटो सेन्टो बचपन स्टोरी प्लस अनल्टल्ड जीवनी तथ्य- प्रारम्भिक प्रबन्धकीय भूमिका
सेवानिवृत्ति पछि, नूनो पुर्तगाली फुटबल क्लब रियो अवेबाट शुरू फुटबल व्यवस्थापनमा गए। आफ्नो साथी र एजेन्ट जर्ज मेन्डिसलाई धन्यवाद, उहाँ छिटो उठ्नुभयो।
जोर्ज Mendes आफ्नो कनेक्शन को माध्यम बाट र धेरै प्रबन्धकीय खाली पदहरु को एक एजेन्ट थियो। उसको सम्झौताको रणनीतिको एक अंशमा उसले अरबौं ग्राहकहरूलाई क्लबहरू खरीद गर्न अस्वीकार गर्नु समावेश छ जबसम्म उसको प्रबन्धकीय ग्राहक प्रबन्धकको रूपमा निश्चित हुँदैन। यस डरलाग्दो संलग्नतामा मेन्डेसले नूनोलाई भालेन्सियामा जागिर दिए जहाँ उनले नेभिल भाइहरूमध्ये एक जनासँग काम गरे।
२un नोभेम्बर २०१ 29 मा राजीनामा गर्ने निर्णय गर्नु अघि नुनोलाई तीन महीनाको ला लीगा प्रबन्धकको रूपमा नियुक्त गरिएको थियो। भ्यालेन्सिया प्रबन्धन पछि, मेन्डेसले एफसी पोर्टोमा नुनोको लागि अर्को व्यवस्थापकीय स्लट प्राप्त गरे। एक मौसम पछि सिल्वरवेयरको पूर्ण रूपमा रहित, नूनो आफ्नो कर्तव्यहरूबाट मुक्त भए। फेरि, उनी मेन्डिजबाट अर्को व्यवस्थापकीय स्लटको लागि पर्खे।
न्युयो एस्पेरिरिटो सेन्टो बचपन स्टोरी प्लस अनल्टल्ड जीवनी तथ्य- त्यो कसरी एक भेडा मालिक बन्यो
वुल्भ्सका पूर्व व्यवस्थापक पॉल लेम्बर्टसँग असहमत भएपछि मेन्डिजले फेरि आफ्नो साथी नुनोलाई वोल्भरहेम्प्टनमा ल्याउने अवसर देखे। अब हामी तिमीलाई भन्दछौं कि यो कसरी भयो।
वुल्भ्सका पूर्व प्रबन्धक पॉल लेमबर्ट क्लबको अरबपति मालिक (फोसुन) मा क्लबलाई ट्रान्सफर प्रमुखका रूपमा नियुक्त गर्नेमा असहमत थिए।
लाम्बर्ट सुपर क्लब एजेन्ट जोर्गे मेन्डिजद्वारा संचालित क्लबको स्थानान्तरणसँग असहमत थिए जो वुल्भ्स अरबपति मालिक फोसुनको घनिष्ठ सहयोगी थिए र क्लबमा हुने सबै सम्झौताको निर्णय गर्ने व्यक्ति थिए।
तपाईंलाई थाहा छ??… वुल्भ्स चिनियाँ मालिक फन्सो (टाढा बायाँ, अगाडिको भूमिका) जोर्गे मेन्डेसलाई दुबै खेलाडी र व्यवस्थापकीय भर्ती व्यवस्थापन गर्न शक्ति प्रदान गर्‍यो। लम्बर्टको दुखी इशाराहरूले उनका दिनहरू मध्य-भूमि क्लबसँगै अंकित बनायो।
२०१ambert१ FA एफए कपको चौथो राउन्डमा भेल्भेज टोलीलाई जितको बावजुद लामबर्टलाई मे २०१ 2017 मा बर्खास्त गरियो, एनफिल्डमा लिभरपूल बिरूद्ध २-१ ले जितेर। May१ मे २०१ 2016 मा, नुनो एस्पिरिटो सान्टो भेल्फाहरूको व्यवस्थापकको रूपमा नियुक्त भए।
न्युयो एस्पेरिरिटो सेन्टो बचपन स्टोरी प्लस अनल्टल्ड जीवनी तथ्य- सल्लाह दिँदै
नुनोको मार्गनिर्देशनको कार्यले धेरै पुर्तगाली खेलाडीहरूलाई जोर्जे मेन्डेजको बखत भेल्भ्समा सामेल हुन मन्जुर गर्यो। सबैभन्दा ठूलो छाल मौसममा नुनो एस्पिरिटो सान्तो पछि क्लब आयो प्रिमियर लिग एक छ वर्षको अनुपस्थिति पछि। यो उनको पहिलो सीजनमा Wolverhampton टाउको कोचको रूपमा भयो।
सीजनमा चार खेल बाँकी रहेको क्लबले उनीहरूको पदोन्नती हासिल गर्‍यो। तिनीहरू दुई खेलहरू बाँकी राख्न च्याम्पियनको रूपमा पुष्टि भए। प्रिमियर लिग सत्र २०१ season-२०१ season सिजनको लागि तयारी गर्ने क्रममा, जोर्ज मेन्डिसले पोर्तुगाली खेलाडीहरूको ब्यारेज सुरक्षित गरे; डियोगो जोटा, जोओओ माउन्टिनो, रूबिन विनाग्रे र Rui Patricio टोलीमा
यो पोर्चुगल आक्रमणले नुनको पक्षमा गरे जसले कहिल्यै आफ्नो ऋणलाई महाकाव्यमा लुकाउन खोजेको छैन। लेखन को समयमा नुनो प्रमुख लीग को सबै भन्दा राम्रो फुटबल रणनीति को एक मालिक हो।
न्युयो एस्पेरिरिटो सेन्टो बचपन स्टोरी प्लस अनल्टल्ड जीवनी तथ्य- व्यक्तिगत तथ्यहरू
पोर्नो मा आफ्नो अन्तिम वर्ष को समयमा नुनो को एक टीम-साथी ब्रूनो अल्व्स ले उनको 'बिना क्यान्डब्यान्ड'। एक व्यक्तिगत नोट मा, Nuno एक धेरै हंसमुख व्यक्ति थियो जसले आफ्ना सहकर्मीहरूलाई कसरी उत्प्रेरित गर्ने जान्दछ। उहाँ सधैं सुन्न को लागी तयार हुन को लागी बोलाइएको थियो। पछि उसको क्यारियरमा जब कोही असफल हुन्छ, नुनो जहिले पनि प्रोत्साहित गर्ने पहिलो हुन्। यदि उसको टोली साथीहरु को एक तल छ, उसलाई पुनः प्रेरणा मा प्रयास गर्न को लागी उनी पहिलो हुन। यी सबै चीजहरूको बाबजुद पनि, उनी अर्को गोलकीपरलाई खुशी पार्न केवल बेन्च न्यानो हुन सहमत भए।
उनको टोलीमा सहभागीहरूले न्युयोलाई गम्भीर बनाउनेछन् जब उनी गोल गरे। जोस Mourinho एक पटक यो धेरै निष्पक्ष राखिएको। "जब तपाईंसँग नुन छ," उसले भन्यो. "तपाईं ड्रेसिङ कोठाको बारेमा चिन्ता गर्नुपर्दैन।"
अन्तमा, नुनको व्यक्तित्व पनि आचारसंहिता ढाँचाद्वारा आकारित भएको थियो जुन उनी एक पटक उनी आफ्नो क्यारियरको हानिमा राखिन्। उदाहरणका लागि, 2010 मा, हल्क र क्रिस्टियन सापनुनुले कडा प्रतिद्वंद्वी बेनिफिकाको घरमा स्टवार्डहरूसँग लड्नका लागि चार महिनाको रोकथाम प्राप्त गर्यो। जबकि अन्य खेलाडी र प्रशंसकहरूले उनलाई आलोचना गरे, नुनोले उनीहरूको टोलीलाई बचाए। यो कार्यले आफ्ना पौष्टिक शब्दहरूको नेतृत्व गर्यो; सोमोस पोर्टो अर्थ (हामी पोर्टो छौं).
"कसैले हामीलाई हाम्रो पाठ्यक्रमबाट उल्ट्याउनेछ," उसले बिस्तृत गर्यो। "त्यहाँ कोही पनि छैन, कुनै अन्याय छैन जसले हाम्रो मिलन खोसिन्छ। हामी पोर्टो हो र हामी सधैं रहनेछौं।
नुनो, घटनाको अधिकार र गल्ती माध्यमिक थिए। समूहको संरक्षण र उनको टोलीको लागि खडा भयो - सबैले आफ्नो दयालु हृदयमा ध्यान दिए।
न्युयो एस्पेरिरिटो सेन्टो बचपन स्टोरी प्लस अनल्टल्ड जीवनी तथ्य- Imperfection
आफ्नो नाम पछाडि धेरै प्रशंसकहरूको बाबजुद पनि, नुनोले एक पटक पिचमा केही असिद्धता देखाएको छ। यो तब भयो जब उनले नील वार्नोकलाई रिस उठाए जसले एकपटक नुनोलाई 'हौं' भनेर गाली गरे।घृणा गर्नुहोस्'। नोट: उनीहरूको विद्रोह अघि, वार्नक कार्डिफमा नुनो धेरै प्रसन्न भएको थियो।
यो कसरी भयो! वर्नकलाई एक पटक तितो मन लाग्यो किनकि उनले आफ्नो कार्डिफ टोलीसँग दुई रोक्ने समय पेनाल्टी गुमाए जसले नुनको पक्षमा पहिले नै एक गोल गरी सकेको थियो। खेल पछि, उनी नुनुसँग बढी निराश भए जसले आफ्नो हात हिलाउनुको साटो आफ्नो स्टाफको साथ पिचमा दगुर्दै गए जस्तो गरी उसले फिफा विश्व कप जितेको थियो।
आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेपछि, नुना अशुद्ध वार्नक तिर ह्यान्डशको लागि भाग्यो, यो पटक यो ढिलो थियो। उनले संयोजन 69-वर्ष-उमेरलाई स्वागत गर्ने कुनै मूडमा भेटिएन। त्यसपछि Warnock त्यसपछि बारम्बार Nuno लाई बताइयोf** k बन्द।
तल आक्रमणको भिडियो हेर्नुहोस्;
नुनो, तथापि, खेल पछि अझै पनि माफी माग्यो, र उनको भावनाले उनलाई अझ राम्रो पाए। उनले तुरुन्त पत्रकारहरूलाई उल्लेख गरे जुन गुस्सा म्यानपावरले अफसोस गरेका थिए। सुनवाईपछि, वार्नकले यसो भने:
“म F ** K दिदैन जुन नुनो भन्छन्। म उसको माफी स्वीकार्दिन। यो वर्गको अभाव हो र पूरै बेइज्जती हो। मैले कडा शब्दहरू प्रयोग गरें र उनीहरूमा प्रत्येकको अर्थ हो। उसले यो जान्न सक्दछ कि बेलायती फुटबलमा तपाईसँग बानीबेहोरा र एक कक्षाको अलि छ जब तपाइँ खेल खेल्नुहुन्छ। मलाई लाग्दैन कि ऊ गइसके सम्म म मेरो अफिसमा जान्छु। म आज राति उसलाई भेट्न चाहान्दिन यदि म इमानदार छु भने। मलाई लाग्यो कि यो एक ठूलो खेल हो र यो त्यस्तो समाप्त हुनु आवश्यक पर्दैन। ”
न्युयो एस्पेरिरिटो सेन्टो बचपन स्टोरी प्लस अनल्टल्ड जीवनी तथ्य- सम्बन्ध जीवन
पेहरबार, धेरै फुटबल प्रशंसकको प्रश्न सोध्नु भएको छ; नुनो एस्पिरिटो सान्तोको स्वास्नी वा प्रेमिका को हो?। सत्य भन्नु हुन्छ कि यो टुक्रा लेख्दा, नुनोको आफ्नो सामाजिक मिडिया पृष्ठहरूमा सम्बन्धको जीवन आफ्नो निजी जीवन मा कुनै जानकारी राख्दैन।
यस लेख लेख्ने समयको रूपमा, कसले गर्नुभयो? पुष्टि भएको छ कि नुनो एस्पिटोटो सेन्टको सम्बन्ध जीवनको बारेमा कुनै रेकर्ड छैन।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो नुनो एस्पिरिटो सान्टो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्या reading्कहरू पढ्नका लागि धन्यबाद। मा LifeBogger, हामी शुद्धता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाईले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।
म नुन र फुटबल को उनको उत्कृष्ट रणनीति को द्वारा धेरै प्रभावित भएको छ .च्यान कप कप क्वार्टर फाइनल मा मैनचेस्टर को बिरुद्ध यो मेरो विश्वास बलियो भयो। ब्वाँसो खेलाडी काफी बकाया था और वे बहुत जीतने के लिए योग्य थे .. नून और उसके मेहनत वाले खिलाड़ियों के लिए मेरे दिल की बधाई। उहाँ उत्कृष्ट प्रबन्धक हुनुहुन्छ, एक साँच्चै राम्रो प्रेरक र निर्देशक। थप सफलताका लागि मेरा शुभकामनाहरू।